अमेरिकी राजदूत कार्कीको समयावधि सकियो ,को होला नयाँ राजदूत ? – www.agnijwala.com
अमेरिकी राजदूत कार्कीको समयावधि सकियो ,को होला नयाँ राजदूत ?
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीको समयावधि सकिए सङै राजदूत बन्न अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र परराष्ट्र सचिव लबिङको दौडमा छन्। सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्कीलाई नै कार्यभार सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिएको छ।
अमेरिकाको लागि राजदूत पद रिक्त भएपछि सो पदमा जान अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा, अर्थसचिव राजन खनाल र परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको दौडधुप चलिरहेको बुझिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडा राष्ट्रियसभा सदस्य हुन्। उनको समयावधि आगामी माघदेखि सकिँदैछ। संसद सदस्य नरहेपछि उनी धेरै समय मन्त्री पनि रहने छैनन्। यद्यपि, ६ महिनाभित्र संसद् सदस्य हुनेगरी उनको पद थमौती हुने सम्भावा पनि छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको चुनाव माघ ९ गतेका लागि तोकिसकेको छ।
केही समयका लागिमात्र सांसद र मन्त्री रहेका खतिवडा अमेरिकी राजदूतको दौडमा सबैभन्दा अगाडि रहेको स्रोत बताउँछ। डा. खतिवडालाई राजदूत बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि सकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ।
आफ्ना कुराहरु राम्रोसँग राख्न सक्ने निडर नेतृत्व र डाटामा खेल्न सक्ने राम्रो अर्थशास्त्रीको रुपमा ओलीले खतिवडालाई लिएको बताइन्छ।
डा.खतिवडाको संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, आइएमएफ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको र उनलाई राजदूत बनाए त्यसको फाइदा लिन सक्ने कुरामा प्रधानमन्त्री ओली ‘कन्भिन्स’ भएको खतिवडाका निकटस्थहरु बताउँछन्।
त्यसो त अर्थमन्त्री भइसकेका डा. खतिवडालाई राजदूत हुन नदिन नेकपाभित्रै लबिङ भइरहेको पनि स्रोत बताउँछ। तर, ओलीले भने भारतका लागि हालका राजदूत निलाम्बर आचार्य र पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायको दृष्टान्त दिँदै मन्त्री भइसकेको व्यक्ति राजदूत हुन सक्ने बताउने गरेको स्रोतको दाबी छ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भइसकेका छन्। उपाध्यक्षबाट अवकाश पाएपछि उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएका थिए। वरीयताक्रममा योजना आयोगको उपाध्यक्षभन्दा गभर्नर तल पर्छ। त्यतिबेला उनले गभर्नर पद ‘ग्ल्यामरस’ भएकाले आफूले वरीयता नहेरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। अमेरिकी राजदूतको पद पनि ‘ग्ल्यामरस’ भएका कारण उनी इच्छुक भएको उनी निकटस्थहरु बताउँछन्।
अर्थकै सचिव पनि दौडमा
अर्थमन्त्रीसँगै सोही मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल पनि अमेरिकी राजदूतको दौडमा रहेको बताइन्छ। उनले पनि यही माघमा अवकाश पाउँदैछन्।
खनाललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर अफर गरिएको तर उनले राजदूतमा इच्छा देखाएको स्रोतको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आगामी चैतमा अवकाश पाउँदैछन्। गभर्नरले अवकाश पाउनु एक महिनाअघि अनिवार्य रुपमा बिदामा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बैरागी अमेरिकाकै लबिङमा
उता, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागी पनि माघमा नै सेवानिवृत्त हुँदैछन्। र, उनी पनि अमेरिकी राजदूतको दौडमा छन्। विषयगत ज्ञान बढी भएकाले आफू राजदूतको बलियो दाबेदार भएको उनको तर्क छ।
सरकारले भने बैरागीलाई श्रीलंकाको राजदूत अफर गरेको बुझिएको छ। श्रीलंकाका लागि राजदूत डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले राजीनामा दिएपछि त्यहाँ राजदूत पद खाली छ। बैरागीले श्रीलंकाको राजदूत अस्वीकार गरेर अमेरिकाकै लागि लबिङ गरिरहेको स्रोत बताउँछ।